Ogaden News Agency (ONA) – Shidaal La’aan Itoobiya Kajirta & Xaalada oo Siimurugtay.
Shidaal La’aan Itoobiya Kajirta & Xaalada oo Siimurugtay.
Posted by Dulmane	/ July 30, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in guud ahaan wadanka gumaysiga Itoobiya laga waayay shidaalkii kadib markuu wadanku galay marxalad xaasaasi ah oo mudo dheer wax laga qaban la’yahay.
Sida xogta aan kuhelayno magaalooyinka waawayn ee wadanka ayaa laga waayay wax shidaal ah waxayna dadwaynuhu waayeen dhamaan adeegyadii aas’aasiga ahaa, sidoo kale waxaa guud ahaan wadanka laga waawayn korantadii dabka waxaana la arkayaa suuqyada waawayn oo laydh la’aan ah.
Nin uhadlay ganacsatada wadanka Itoobiya ayaa sheegay in ay xidhan yihiin dhamaan warshadihii wax soosaarku taasna ay kaliftay in ay wax walba qaaliyoobaan ama lawaayaba, sidoo kale ganacsadaha ayaa sheegay in ay waayeen shidaal ay baabuurta kushubtaan taasna ay keentay in ay lugahooda maalaan.
Wasiirka macdanta iyo Gaaska Matuma Makasa oo warfidiyeenka lahadlay ayaa sheegay in shidaalkii wadanka soo gali lahaa uu kuxayiran yahay dakada wadanka Jabuuti, halkaas oo ah marinka ay sida wayn u isticmaalaan Itoobiyaanku, wuxuuna sheegay in laheli doono shidaal ayaamahan soosocda.
Qaar kamid ah shacabka magaalada Addis Ababa oo warbaahinta lahadlay ayaa dhankooda eedeeyay taliska wayaanaha waxayna sheegeen in ay jirto mas’uuliyad xumo, iyagoo sheegay in ay la’yihiin gaaskii cuntada lagu karsan jiray.
Arinta ugu daran ee shacabka magaalooyinka waawayn kunool haysata ayaa ah biyo la’aan waxayna biyuhu kuxidh naayeen korantada oo haday tagto biyuhuna ay tagayaan.
Sikastaba ha ahaatee waxaa arinta baasiin kusii shubaya mudaharaadkii oo maalinba maalinta kadambaysa kasii daraya waxaana guud ahaan wadanka kasocda kacdoon dadwayne oo lagu diidan yahay kooxda TPLF ee mudada rubuc qarniga ah talada wadanka xooga kuhaysatay.